ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ -၃ - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Experience / Khun Sai / ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ -၃
ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ -၃
မြန်မာ နဲ့ တရုတ် နယ်နမိတ်ချင်းက မိုင် ၁၂၀၀ လောက် ထိစပ်နေတာ ။ နေ့စဥ် လဲ ဥဒဟို ဝင်ထွက် ရောင်းဝယ် နေကြတာ ၊ ခုထိ ကိုရိုနာ မရှိသေးဘူးလို့ ပြောနေတာ ယုတ္တိမတန်ပါ ဘူး ။ ဥရောပ အဖြူတွေက အဲလိုတွက်ပြတ ယ် ။ ပြည်တွင်းမှာလဲ အစိုးရနဲ့ ဌါနဆိုင်ရာကို မယုံသင်္ကာ သူတချို့ က ဒါ စာရင်းလိမ်ထားတာ ။ရောဂါက တကယ် ဖြစ်နေပြီ ။ အချက်အလက် အမှန်တွေ ကို ဖွက်ထားလို့ ။ ဗိုင်းယပ်စ် ပိုးကို ပါ အောင် နမူနာ မယူတတ်ကြလို့ ။ စနစ်တကျ ရှာနိုင် တဲ့ ခေတ်မှီ စက်တွေ မရှိလို့ ။ အဲသလို အဲသလို ထင်ရာသန်ရာ တွေ ပြောကြ ရေးကြတာပေါ့ ။
ကိုဗစ် က တကယ် ကိုက်ရင် အပေါက် အကြီးကြီး ကိုက်မှာ ။ ခြောက်ခြောက်ခြားခြား ဖြစ်အောင် ကိုက်မှာ ။ လူနာတွေ ဖွက်မရအောင်ကို ကိုက်မှာ လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ထင်တယ် ။
ကမ္ဘာမှာ ဆားစ် ဆိုတာ ဖြစ်ဖူးတယ် ။ မားစ် ဆိုတာ ဖြစ်ဖူးတယ်။ အီဘိုလာဆိုတာလဲ ဖြစ်ဖူးတယ်။ H1N1 ကြက် တုပ်ကွေး ဖြစ်ဖူးတယ်။
ဆားစ် SARS (severe acute respiratory syndrome) နဲ့ မားစ် MERS ( Middle East respiratory syndrome ) တို့က ကိုဗစ်လိုပဲ ။ ကိုရိုနာ မျိုးစိတ် Coronaviruses တွေချည်းပဲ ။
ဒါပေမယ့် ဆားစ်က ၂၀၀၂ -၂၀၀၃ မှာ ဖြစ်ခဲ့ပြီ သေနှုန်းက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ။ ကိုဗစ်ထက် သေနှုန်း မြင့်ပေမယ် တကမ္ဘာလုံးမှာ အတည်ပြုလူနာ ၈၀၉၈ ယောက် ။ သေတာက ၇၇၄ ယောက်ထဲ ဆိုတော့ လူတွေ အလွယ်လေး မေ့လို့ရကြ တယ်။
မားစ် က ၂၀၁၂ ဆော်ဒီအာရေးဗျ က စဖြစ်ပြီး ၂၇ နိုင်ငံကို ပျံ့ သွားတယ်။ အတည်ပြုလူနာ ၂၄၉၄ယောက် ။ သေတာ ၉၁၂ယောက် ။ သူက သေနှုန်းအတော်မြင့်ပေမယ့် ကူးစက်တာ နည်းတယ် ။
အီဘိုလာ လဲ အရမ်း ပြင်းထန်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါတမျိုးပဲ ။ ၂၀၁၄ ကနေ ၂၀၁၆ အထိ ဖြစ်တာမှာ လူ တရာဖြစ်ရင် ၅၀ အထိ သေတဲ့ နှုန်းနဲ့ ၁၀ နိုင်ငံကို ကူးစက်သွားဖူး တယ်။ အတည်ပြုလူနာ ၂၈၆၅၂ယောက်။ သေဆုံး ၁၁၃၂၅ ။ ဒါပေမယ့် သူ့ကူးစက်ပုံ က မစင် သွေး သလိပ် ကနေ ကူးတာမျိုး ဆိုတော့ ကူးစက်မှုကို ထိန်းချုပ်ရတာ လွယ်တယ်။ လူတွေ က လိမ္မာပါးနပ်လာကြ သေချာ ကိုင်တွယ်ကြတဲ့ အခါ တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲ - အီဘိုလာ မျိုး တုန်းသွားတာ လား ငုတ်သွား တာ လား၊ ဗီဇ ပြောင်းသွားတာလား( Mutation) မသိဘူး။ အခု ပျောက်ကွယ်နေပြီ ။
၂၀၀၉ လောက်မှာဖြစ်တဲ့ ကြက်တုပ်ကွေး ငှက်တုတ်ကွေး Swine flu, bird flu or Avian fluတွေကိုလဲ လူတွေ သိတ် အမှတ်မရချင်ဘူး။ သူတို့က သိတ်မနှိပ်စက်ခဲ့ကြဘူးမဟုတ်လား. လူ တသောင်းကျော်လောက်ပဲ ပျက်စီးခဲ့တာ။
အခု ကိုဗစ်က တော့ ၂လ၃လာလောက်အတွင်း နိုင်ငံ ၁၅၀ ကျော်ကို ကျူးကျော်သိမ်းပိုက် တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်။ လူ ၂သိန်းကျော်ကို ကူးစက်ထားတယ်။ လူ တသောင်းကျော် အသက်ကို ချွေချလိုက်ပြီးပြီ ။ နားလည်တဲ့ ပညာရှင်တွေက သူ့ကို အရမ်းစိုးရိမ်နေကြတာပေါ့ . ပိုးက အသစ် သူ့အကြောင်းမသိသေးတာ ။ သူ့ကို ထိန်းချုပ်ရမယ့်နည်းလမ်း က ခက်တာ ။
ခုထိ မြန်မာပြည်ကို ဗိုင်းယပ်စ် မကိုက်သေးဘူး ဆိုတာ မယုံနိုင်တာ ကြောင့်လား ။တကယ်ဖြစ်လာရင် ရေရှည်မယ့် ပြဿနာကြီး ဆိုတာ တွက်မတာကြောင့်လား ။ သူ့နိုင်ငံသားတွေ အင်္ဂလိပ်တွေ ကို ပြန် လာကြဘို့ သူ့အစိုးရက ခေါ်တယ်။ သူတနိုင်ငံထဲ တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဂျာမဏီလဲ အတူတူပဲ ။ အစိုးရက ယူရို သန်း ၈၀၀ ထုတ်ပေးပြီး နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ ဂျာမဏီ နိုင်ငံသားတွေအားလုံး ပြန်လာခဲ့ကြတော့လို့ ခေါ်တာပဲ ။ အကြီးအကျယ် ကူးစက်ပျံ့ပွါးချိန်ကျမှ ၊ လေဆိပ်တွေ၊ လေကြောင်းလိုင်းတွေ၊ နယ်စပ် တွေ ၊ အသွားအလာတွေ အကုန်ပိတ်ကုန်မှ ခေါ်ရင် ပိုခက် မှာ တွက်မိကြပုံ ရပါ တယ်။
အင်္ဂလန်မှာ ဒီမနက် တော့ အစိုးရက ၂၀၁၇ က လောက် စပြီး အလုပ်ထွက်- ပူပူနွေးနွေး ပင်စင်ယူထားကြတဲ့ ဆရာဝန်တစ်သောင်းခွဲ ။ သူနာပြု ငါးသောင်း- ( စုစုပေါင်း အင်အား ၆သောင်းခွဲ) ကို ကျန်းမာရေးဌါန NHS ဆီ ပြန်လာကူညီကြဘို့ မေတ္တာရပ်ခံ နေပါပြီ။ PPE ( Personal Protection Equipment ) ခန္ဓာကိုယ်ကို ကာကွယ်တဲ့ ချပ်ဝတ်တန်ဆာ) တွေ ကောင်းကောင်း ပေးပါ့ မယ်လို့ အာမခံသေးတယ်။ အရင်ရက်က သူတို့ NHS ကျန်းမာရေး ဌါန က ဆရာဝန်ဆရာမတွေကို ထုတ်ပေးထား တဲ့ PPE တွေဟာ တရုတ် PPE တွေ လောက် တောင် အရည်အသွေးမရှိဘူးလို့ တချို့က ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေ သရော်တာကို အစိုးရ သတိထားမိသွားတာလား ။ အတိုက်အခံတွေက လွှတ်တော်မှာ တော်တော် စွာလို့လား မပြောတတ်ဘူး။ ဒီတကြိမ်မှာ PPE ကို အလုံအလောက်နဲ့ - အမျိုးအစားကောင်းကောင်း ထုတ်ပေးပါ့မယ် လို့ အာမခံတယ် ။
ဒီကိစ္စ ကလဲ အင်မတန်အရေးကြီးပါ တယ် ။ ပင်စင်ယူထားကြပြီးမှ အသက်နဲ့နီးတဲ့ အလုပ်ကို စေတနာဝန်ထမ်း လာ လုပ်ကြရမှာ ။ ကူးစက် ခံရ ရင် ပင်စင်လေးတောင် မစားလိုက်ရဘူးလို့ တွေးပူစရာ။
ဆေးလောကသားတွေဆိုတော့ ဒီ နင်ဂျာ ကိုရိုနာ ရဲ့ တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်း ကို တီးခေါက်မိတယ်။ အသက်က ၆၅ အကျော် ။ နှလုံးသွေးတိုးဆီးချိုသမားမျိုးဆို သူက အသာလေး ဒုက္ခပေးမှာ ။ ကျန်းမာရေးဌါနကလဲ ဒါကိုသိလို့ အသက်သိတ်မကြီးသေးတဲ့ ၂၀၁၇ နောက်ပိုင်း အနားယူတဲ့ ။ အသက် ၇၀ မကျော်သေးသူတွေကို ခေါ်ရတာ ။ သူတို့နဲ့ မလုံလောက်သေးဘူး ဆိုရင် ဆေးကျောင်းနောက်ဆုံးနှစ် တွေ ။ သူနာပြုသင်တန်းဆင်းတွေ ဆီကလဲ အကူအညီရနိုင်ဘို့ လဲ စီမံထားကြပြီ ။
အမေရိကားလဲ အခုမှာ တော့ အသဲအသန် ခဲမှန်နေခဲ့ပါပြီ။ လူသန်း ၄၀ နေထိုင်ရာ ကာလီဖိုးနီးယားကို ဒီနေ့ ပိတ်ထားလိုက်ရပြီ။ အင်္ဂလန်ကလဲ ကျောင်းတွေ အကုန်ပိတ်။ အရက်ဆိုင်တွေ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေ နိုက်ကလဒ်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေ လဲ အကုန် ပိတ်ခိုင်းပြီ ဆိုတော့ အလုပ်မရှိ ငတ်ကြရတော့မယ်။ မငတ်စေချင်ရင် အစိုးရက ကျွေးထားရဘို့ပဲ ။ ဘဏ္ဏာရေး ဝန်ကြီးက ပေါင်စတာလင် ဘီလီယံ ၃၃၀ သုံးမယ်လို့ ရာထားတဲ့ အကြောင်းကြေငြာထားတယ်။
ဒုက္ခ ပတ်မှာက ဆင်းရဲတဲ့ တိုင်းပြည်တွေပါပဲ ။ မိသားစု ၂၀ က အိမ်သာ တလုံး ဘုံထားသုံး တဲ့ ကင်ညာမှာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ လို့ ဆွေးနွေးတဲ့အသံကြားတယ်။ အဲလို ညပ်ညပ်သတ်သတ် နေရ တဲ့ လူနေမှုစနစ် ကြားကို အခုချက်ခြင်း သွားပြီး ကိုရိုနာ ဗိုင်းယပ်စ် မကူးစက်အောင် ထိရောက်တဲ့ ကာကွယ်မှု ဆိုတာက
တယောက်နဲ့တယောက်ခပ်ခွါခွါ နေပေးကြခြင်းပါ ( Social distancing)
ကိုယ်ဖာသာ သီးသန့် ခွဲနေကြခြင်းပါ ( self isolation ) လို့
ဖုတ်ပူမီးတိုက် ရုပ်မြင်သံကြား က ဘယ်လိုတွေ များ ပညာပေးကြမှာပါလိမ့် ။
ခွန်ဆိုင်း ( ၂၁-၀၃-၂၀၂၀ )
ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ -၃ Reviewed by MoeMaKa on 10:30 AM Rating: 5